संघर्ष गर्दा गर्दै अस्ताएका सुशान्तको घरमा भेटिए यस्ता प्रमाण – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Bollywood News & Updates/संघर्ष गर्दा गर्दै अस्ताएका सुशान्तको घरमा भेटिए यस्ता प्रमाण
सुशान्त सिंह राजपुत भारतका लोकप्रिय कलाकार हुन् , टेलिभिजन बाट अभिनयमा प्रवेश गरेका उनले बलिउडमा धेरै नै संघर्ष गरेको बताएका थिए ।आइतबार मात्रै सम्पुर्ण फिल्म जगतलाई नै आश्चर्यमा पार्दै उनले आत्माह-त्या गरे ।
उनले आत्माह-त्या गरेपछि बलिउडमा नेपोटिजमको बारेमा कुरा उठि रहेको छ । कंगना रनावतले उनलाई समर्थन गर्दै उनलाई मानसिक रुपमा कमजोर नभन्न आग्रह गरेकी छिन् । त्यस्तै २५ वर्षकै उमेरमा प्राण त्याग गरेकी जिया खानकी आमाले पनि बलिउडले संघर्षको महत्व नबुझेको बताएकी छिन् ।
र यो पनि : आफ्नै मेहिनतमा २६ वर्षमै करोडपति बनेकी आलियाको अपार्ट मेन्ट कस्तो छ ?
गाडी र बाइ कका सोखिन सुशान्त अन्तरिक्षको बारेमा धेरै नै चासो राख्थे । द कपिल शर्मा शोमा उनले घरमा टेलिस्कोप भएको स्वीकार गरेका थिए ।प्रहरीले उनको घरबाट ५ ओटा डायरी भेटेको बताएको छ । जस्को बारेमा अनु सन्धान भइ रहेकाे बुझि एको छ ।
बलिउडका व`रिष्ठ अभिनेता जग दीपको निधन
यी ५ बलिउड अभिनेताका श्रीमती छन् धेरै कान्छी, उमेर अन्तर सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ !
सुशान्तको सम्झनामा आफ्नो सपना नै तोडेर बलिउडलाई बाइ बाइ गरिन् अभिनेत्री सन्जना संघीले